China Fekitori inopa HPMC yekuvaka shandisa Mugadziri uye Mutengesi |Longou
Fekitari inopa HPMC yekuvaka kushandiswa
1. MODCELL Hydroxypropyl Methyl Cellulose(HPMC), is non-ionic cellulose ethers inogadzirwa kubva ku natural high molecular(purified cotton) cellulose kuburikidza nenhevedzano yemakemikari reaction.Inogona kunyungudika mumvura pane chero chiyero, max yavo, kutarisisa kunoenderana nekuona kwavo.
2. Vane zvinhu zvakadai sekunyunguduka kwemvura, pfuma yekuchengetedza mvura, isiri-ionic type, yakagadzikana PH kukosha, basa repamusoro, reversibility yekugadzira gelling mukupisa kwakasiyana-siyana, kuwedzera, cementation film-forming, lubricating property, mold-resistance uye nezvimwe.
3. Nezvinhu zvose izvi, zvakashandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kukora, kuputika, kumisa kugadzikana, uye kuchengetedza mvura.
1. MODCELL Hydroxypropyl Methyl Cellulose(HPMC), isiri-ionic cellulose ethers inogadzirwa kubva kune yakasikwa yakakwira molecular (yakanatswa donje) cellulose kuburikidza nenhevedzano yemakemikari reaction.Inogona kunyungudika mumvura pane chero chiyero, max yavo, kutarisisa kunoenderana nekuona kwavo.
4. Iyo ine isingawanzo uye yakakosha inoumbwa nemuviri uye makemikari ehupfumi, maererano nemusiyano wekutsiva dhigirii reboka rekutsiva uye dhigirii rakagadziridzwa.
5. Pashure penzvimbo yayo ine porous yave yatora unyoro, inogona kuchengetedza unyoro;
Mugadziri weHPMC yekuvaka anoshandisa 1
Chitarisiko Upfu chena
Kuwanda kwehuwandu (g/cm3） 19.0--38
Methyl yemukati(%) 19.0--24.0
Hydroypropyl content (%) 4.0--12.0
Gelling tembiricha (℃） 70--75
Hunyoro hwemukati(%) ≤5.0
Zvakasara (Ash) ≤5.0
HPMCzvigadzirwa zvine maficha akavandudzwa, anoshandiswa zvakanyanya muminda yekuvaka seceramic tile adhesive, simende self-leveling, insulation dhaka, plastering dhaka, yekushongedza putty, gypsum.
HPMC imhando yehupfu yerabha inogona kushandiswa sekuwedzera kwechikafu, dispersant, emulsifier, suspending agent, thickener, excipient, filler, stabilizer, oil resistant coating, etc.
➢Nguva yakareba yakazaruka
➢Kuchengetedzwa kwemvura kwakakwirira
➢Yakakwana tensile adhesion simba
Zvakapfuura: Rigid RDP AP2160 yeC1T C1TE C1F inonamira mataira
Zvinotevera: Maufacturer weHPMC giredhi remazuva ese
Hydroxyethyl methyl cellulose mvura inochengeta ...
Kuvaka giredhi yakakwira yekuchengeta mvura mumiririri h...